Xildhibaan Cali Saciid: Waxaan ku dadaaleynaa inuusan dagaalka Cadalle dib dambe u soo noqon – Kalfadhi
Xoghayaha Guuddiga Cadaaladda ee Golaha Wakiillada Hirshabeelle, Xildhibaan Cali Saciid Sh. Maxamed, ayaa u sheegay Kalfadhi in wax kasta oo karaankooda ah ay isugu geynayaan in ay joojiyaan dagaal sokeeyey oo shalay ka bilowday degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe, kaas oo ay ku geeriyoodeen dad ka badan 30 qof, intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen.
“Ka fadhiisan mayno inaan hawshaas galno” ayuu Xildhibaan Cali ku yiri wareysi uu siiyey Kalfadhi. “Dadka waxaan ugu yeereynaa iney heshiiyaan, qabaa’ilka labada dhinac kasoo kala jeeda in la wada fadhiisyo, in la fiiriyo waxa dhibku ka taagan yahay” ayuu hadalkiisa raaciyey. Waxa uu sheegay in markii uu dagaalku bilowday ilaa iyo hadda uu xaalka goobta colaaddu aad u sii adkaanayo.
Waxa uu sheegay in beelaha halkaas ku dagaalmaya ay xiisaddu ku bilaabatay, iyada oo ay dhex joogaan ciidanka dowladda, sida uu hadalka u dhigay. “Dowladda waxaan ugu baaqayaa in iyaduna ay awood meeshaas geyso, oo si dhab ah arrintaas loo daraaseeyo, loona maamulo” ayuu yiri Xoghayaha Guddiga Cadaaladda ee Baarlamaanka Hirshabeelle, isaga oo u arka in ciidanku ay dagaalkaas xakameyn karaan.
Beelaha ku dagaalsan Cadalle waxay hadda ka hor ku dagaalameen isla deegaankaas, markaas oo uu sheegay Xildhibaan Cali inuu u arkayey iney xaliyeen sababta dagaalkaas. Waxa uu u sheegay Kalfadhi in ay, sikastaba, ku dadaalayaan in aysan dib ugu soo laaban deegaankaas colaadda hadda ka taagan oo kale, marka ay xaliyaan kadib. “Waxaan ka shaqeyneynaa inaan meesha wanaagga ah ka qabano, oo aan isku dayno inuu dagaalkaan markii ugu dambeyso noqdo, mar dambana uusan dib u soo noqon” ayuu yiri Xildhibaan Cali.